Israel: Anyị kwesịrị imeghe ọnụ ụzọ maka ndị njem nleta na Palestine
Home » Na-agbasa News Travel » Israel: Anyị kwesịrị imeghe ọnụ ụzọ maka ndị njem nleta na Palestine
Ọtụtụ narị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile gbadara na Jerusalem maka nnọkọ Mgbakọ International nke Ndị njem njem kwa afọ, ka ndị ọkà okwu na ndị sonyere tụlere usoro iji chebe ndị njem pụọ n'ihe otiti nke iyi ọha egwu.
"Ọ bụ oge kwesịrị ekwesị n'ihi na enwere ụdị ọchịchọ ịmata ige ntị na ịgbanwee echiche na echiche," Ilanit Melchior, Director nke njem na Jerusalem Development Authority, metụtara Media Line. "Site na-enwe nzukọ a, anyị anaghị anwa izobe okwu banyere [iyi ọha egwu] kama ọ bụ itinye ya na eserese ngosi."
Israel nwere nsogbu nke iyi ọha egwu, ikekwe ọkachasị na 2000-2003 Second Intifada, nke Palestine na-egbu onwe ya na bọs na ụlọ ahịa na mba ahụ. N'agbanyeghị nnukwu njem na njem mgbe nke ahụ gasịrị, steeti ndị Juu na 2017 setịpụrụ ihe ndekọ maka ndị njem na-abata, na-eme atụmatụ ndị ọbịa 3.6.
Ọ bụ ezie na esemokwu Israel na ndị Palestaịn na-aga n'ihu, otu n'ime ndị isi okwu na ogbako ahụ juru ndị bịara nnọkọ ahụ anya site na ịtụ aro na mba ahụ nwere ike, n'ụzọ ụfọdụ na-emegide mmetụ, belata iyi ọha egwu site n'ịkwalite ntakịrị njem na West Bank.
"Anyị kwesịrị imeghe ọnụ ụzọ nye ndị njem nlegharị anya nke Palestine," Brig. Gen. (ret.) Avi Bnayahu, onye bụbu ọnụ na-ekwuchitere ndị agha Israel nke na-elekọta ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem njem ugbu a, gbara akwụkwọ na The Media Line. “Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ di na nwunye Palestine chọrọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye na Israel, ma ọ bụ Osimiri Nwụrụ Anwụ ma ọ bụ Eilat. Gini mere ha ji aga Germany karia? Njem nleta bụ ụzọ dị mma iji kpochapụ adịghị mma ma gaa n'ihu. ”
N’akụkụ macro, akụkọ Ngalaba Ọchịchị na-ebipụta na nso nso a gosiri na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu dị 8,584 n’ụwa nile n’afọ gara aga, na-akpata ọnwụ nke ihe dị ka mmadụ 14,000.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọgụ mere na mba ndị agha tisasịrị dịka Iraq, Syria na Afghanistan, ndapụta ha na mba ndị kwudosiri ike site na France ruo Turkey gaa Thailand emeela ka echiche nke ihe egwu dị na mkpebi mkpebi ndị njem.
"Ọ bụ ajọọ ihe osise ochie nke na-adịghị naanị na Middle East," Dirk Glaesser, Director nke Sustainable Development na United Nations Tourism Organisation, mesiri The Media Line ike. "Ọ dị mkpa na usoro ịre ahịa eji ya iji mee ka o doo anya na ebe ọ ga - emetụta bụ na, dị ka ọ ga - eme, ndị na - adịghị."
N'ezie, otu isi okwu nke nzuko ahụ bụ mkpa ọ dị inye ndị mmadụ nkọwa zuru oke ebe na mgbe mwakpo na-eme, iji kpochapụ echiche ahụ na n'ihi na otu ebe a kapịrị ọnụ nwere ike ọgba aghara ya mere ndị ọzọ nọ nso.
"Mgbe ndị China hụrụ map ụwa ma tụlee etu obodo ha si jiri tụnyere ụfọdụ na Middle East, ọ bụrụ na enwere nsogbu na Syria ha chere na ọ gafere na mpaghara ahụ dum, gụnyere Israel ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe mere ebe ahụ," Roy Graff, Onye isi nchịkwa na Dragon Trail Interactive, ụlọ ọrụ na-akwado njem nleta site na China, kọwara The Media Line.
Otú ọ dị, e nwere ihe karịrị nanị ịtụkwasị ihe anya ma a bịa n'ihe ize ndụ ndị dị na ịga n'otu ebe ma ọ bụ ọzọ. Yabụ, ịnweta ozi ziri ezi n'aka ndị njem nwere ike ọ bụghị naanị ịchekwa ndụ kamakwa inye ndị ezumike ahụ obi iru ala na-ahọrọ ịbanye paradaịs mgbe ụfọdụ.
KLM Hụrụ Indonesia n'anya kemgbe 1924: Douwe Egberts Kọfị na-egosi ihe kpatara ya
Southwest Airlines na Travelport megharịrị nkwekọrịta